[Ukara] dr.fone Toolkit - Android Data nchicha: Ofụri Esịt Ichicha Ihe niile na android na kpuchido nzuzo gị
dr.fone Toolkit - Android Data nchicha
Ofụri Esịt Ichicha Ihe niile na android na kpuchido nzuzo gị
Simple, pịa-site usoro.
Hichapụ gị gam akporo kpamkpam.
Ichicha photos, kọntaktị, ozi, oku na ndekọ na niile onwe data.
-Akwado ndị niile na gam akporo ngwaọrụ dị na ahịa.
Gbalịa ya free Buy Ugbu a
Simple nhichapụ ma ọ bụ ụlọ mmepụta ihe nrụpụta anaghị ihichapu data na android-adịgide adịgide. The ehichapụ data ka nwere ike natara na nkà na ụzụ dịnụ. Gam akporo Data nchicha ana achi achi na nzuzo gị bụ nchebe site kpamkpam ihicha ehichapụ faịlụ, na-ekpocha na-eme nchọgharị akụkọ ihe mere eme, caches ma na-echebe onwe gị ozi.
Na-ere ma ọ bụ inye onyinye gị gam akporo ekwentị?
Jiri gam akporo Data nchicha hichapụ gị onwe onye data mbụ.
Ofụri Esịt ichicha ihe niile na gị gam akporo ekwentị.
Na-ere gị ji gam akporo ekwentị ma ọ bụ mbadamba? Jiri dr.fone Toolkit - Android Data nchicha na-adịgide adịgide na ichicha ihe niile na gị gam akporo na kpuchido nzuzo gị.
Kpamkpam ehichapụkwa gam akporo ekwentị ọcha.
Traditional factory data nrụpụta anaghị ọcha gị onwe onye data na ekwentị 100%. Gam akporo Data nchicha enyere gị ehichapụkwa gam akporo ngwaọrụ ọcha ma na-enweta ya azụ ụlọ ọrụ ntọala
Ihichapu niile iche iche nke data na gam akporo ekwentị.
Gam akporo Data nchicha enyere gị ihichapu onwe data, dị ka photos, ozi, kọntaktị, na-akpọ ndekọ, na ndetu, kalenda, na ngwa data, wdg
Ichicha ochie gam akporo ekwentị ma na-echebe onwe gị.
Na na nri ngwaọrụ, ehichapụ data on ochie gam akporo ekwentị ka nwere ike gbakee. Na 1 nke 10 bụ a aja njirimara na-ezu ohi na ụwa. Chebe onwe gị ozi site na ibibi ha dị ọcha kpam kpam.
Akwado ọtụtụ puku na gam akporo ngwaọrụ na-agba ọsọ dị iche iche na android usoro.
Ọwọrọ dr.fone Toolkit - Android Data nchicha-akwado ndị niile na gam akporo ngwaọrụ dị na ahịa. Ọ ga na-akwado ndị ọzọ ozugbo ọhụrụ na ngwaọrụ dị.
Ichicha All iche iche nke Personal Data na gị gam akporo
Ị nwere ike iji gam akporo Data nchicha na-ehichapụ ihe niile onwe ozi, gụnyere photos, ozi na Mgbakwụnye, kọntaktị, oku na-aga akụkọ ihe mere eme, ndetu, kalenda, ihe ncheta na ngwa data, etc na gị gam akporo-adịgide adịgide.
Ntak emi Họrọ dr.fone Toolkit
Dị Mfe, ngwa ngwa, ma dị irè.
Ehichapu data nwere ike ghara natara site ọ bụla ngwá ọrụ.
Ọ dịghị data nọ ma ọ bụ leaked n'oge usoro.
Interface maka onye ọ bụla iji.
Akwado All gam akporo Ngwaọrụ
Gam akporo Data nchicha-akwado ndị niile dị na gam akporo ngwaọrụ na ahịa. N'agbanyeghị na ị nwere Samsung, HTC, Sony, Motorola, Google Nexus, LG, ma ọ bụ ZTE, etc na ihe gam akporo version ekwentị gị na-agba ọsọ, A gam akporo Data nchicha enyere gị ichicha ihe niile na ekwentị-adịgide adịgide.
Olee otú gam akporo Data nchicha-arụ ọrụ?
Gam akporo Data nchicha-enyere gị aka ijere gị data kpamkpam unreadable wee ọcha ahụ dum disk kpamkpam. Mgbe ahụ, ọrụ dị mkpa na-aka eme factory nrụpụta na ekwentị Afterword. Na abụọ ndị a arụmọrụ, gị data ga-enwe ike na-natara site na onye ọ bụla ọzọ.
Ndi akporo Data nchicha kpamkpam ihichapu niile data na ekwentị?
Ee, A gam akporo Data nchicha kpamkpam ọcha niile onwe onye data na ekwentị, tinyere kọntaktị, ozi, foto, na-akpọ ndekọ, kalenda, na ngwa na ngwa data, wdg
Gịnị ka m kwesịrị ntị ka mgbe m na-eji gam akporo Data nchicha?
Biko adịghị Ikwupu ekwentị ma ọ bụ na-emeghe ọ bụla ọzọ Android management software n'oge dum usoro. Na na na njedebe, na-eso ntụziaka na gam akporo Data nchicha ịrụ factory nrụpụta na ekwentị gị.
Gịnị na gam akporo ngwaọrụ ka gam akporo Data nchicha support?
Ugbu gam akporo Data nchicha-akwado ndị niile na gam akporo ngwaọrụ dị na ahịa. Ọ ga ngwa ngwa na-akwado ihe ọhụrụ gam akporo ngwaọrụ mgbe ha na-tọhapụrụ.
" Wondershare dr.fone Toolkit maka gam akporo nwere ihe dị mfe iji interface na ike igodo site na ọrụ niile ọkwa nke nka. Ọ bụ fechaa na adịghị eji nnukwu ego nke usoro ego. N'ozuzu, a kama uru kit nwere ike inwe unu nke a ole na ole nnyapade ọnọdụ mgbe ọ na-abịa data mgbake gị gam akporo ngwaọrụ. Mụtakwuo >>
- Site filehippo, a n'elu-họọrọ software download saịtị na-enye top-họọrọ software naanị.
ọ na-arụ ọrụ!!
dr.fone kpochara m Samsung S5 kpamkpam na-enweghị a ikedo. ugbu a, m nwere ike na-ere ya na-enweghị nchegbu banyere m ozi.
gooood ọrụ !!!
Gam akporo data nchicha n'ezie were were.
Mgbe mbụ m bụ obi abụọ. Ma dr.fone amama arụ ọrụ n'ụzọ zuru okè. Nice!
Top 7 gam akporo Data nchicha Software na-adịgide adịgide Hichapụ Your Old gam akporo
Top 6 gam akporo Data ichicha Apps Chebe Your Nzuzo
Olee otú Dịghachi ehichapụ Photos si Samsung Galaxy / Note
Naghachi Data si Samsung Mobile ekwentị mkpanaaka na
2 Ụzọ Mee Samsung Data Recovery Ị-amarakwa
Olee otú Dịghachi ehichapụ ozi na gị Samsung Cell Phone
The Best Ụzọ Dịghachi ehichapụ Content si Samsung ekwentị mkpanaaka na
Rescue data si agbajikwa gam akporo igwe na mbadamba na 5 nkeji.